Andro: 14 mey 2020
Ny sandam-baravarana no alefa amin'ny fitaterana mpandeha amin'ny arabe
Raha ny fitaterana mpandeha an-trano dia ampiharina ny saran'ny vidin-drindrina amin'ny alàlan'ny 19 Jolay noho ny fipoahan'ny Covid-31 dia eo anelanelan'ny 100 ka hatramin'ny 500 liras. Ny vidin'ny tapakila fitaterana mpandeha an-dalambe dia nohavaozina nataon'ny Ministeran'ny Fitaterana. [More ...]
Fanapahan-kevitra momba ny hetra ho fanamafisana amin'ny entana fotsy
Nadir Küpeli, Filohan'ny Birao Mpanolo-tsaina ao amin'ny Eskişehir, dia manohana ny indostria ao amin'ny firenena mba hitazonana ny famokarana sy ny fifaninanana mandritra ity vanim-potoana tetezamita hetra môsialy fanampiny ity, izay hampiharina amin'ny tahan'ny isan-karazany hatramin'ny 30 isan-jato. [More ...]
Nanjary 'rano velona' ho an'ireo mpivarotra tantara manan-tantara ny krisifotsy
Bursa Chamber of Commerce and Industry, (BTSO), izay nametraka tetikasa maro ho an'ny Bazaar ara-tantara sy ny Faritra Hanlar, izay hita ao amin'ny foibe manan-danja indrindra izay itondran'ny miantsena sy varotra ny onja, miaraka amin'ny coronavirus. [More ...]
EGO, izay nampiana vaovao ny fanavaozana natao mba hijanonana ao an-trano sy hanomezana fitokana-monina ho an'ny olom-pirenena, nandritra ny valan'aretina coronavirus (Covid-19), dia nitondra ny fampiharana Ankarakart an-tserasera. Ankara Metropolitan kaominina EGO General Directorate [More ...]
Ny monisipaly Eskişehir Metropolitan, izay namatsy fampiasa betsaka tamin'ny fitaterana an-tanàn-dehibe dia tonga hatrany amin'ny Firaisana ara-barotra Yıl faha-75 tamin'ny alàlan'ny hopitaly City sy Kumlubel tamin'ny Opera, aorian'ny Faha-75 taona Yıl Neighborhood sy Şeker Mahallesi. [More ...]
Natomboka tany Antalya
Ny ben'ny tanàna ao Antalya Metropolitan Muhittin Böcek dia nanambara fa nanomboka ny fangatahana Suspension Invoice ho an'ny vahoaka Antalya izay manana fahasahiranana ara-toekarena. Ny filazana fa nosokafana ny rafi-pandoavam-bola toy ny ankehitriny amin'ny fampiharana Suspended Invoice, izay manan-kery amin'ny fidirana ASAT. [More ...]
Ny fiara fitateram-bahoaka dia afaka maimaimpoana amin'ny otrik'aretina amin'ny taratra Ultraviolet
Ben'ny tanànan'ny Kayseri Metropolitan Memduh Büyükkılıç, ASPİLSAN Mpikambana mpikambana ao amin'ny Oniversite Erciyes University Faculty of Engineering Assoc. Dr. Nanatanteraka fivoriana niaraka tamin'ny fandraisan'i Ahmet Turan Özdemir izy. Miaraka amin'ny fihaonambe horonantsary [More ...]
Soso-kevitra manodidina ny 125 no naato fotoana folo andro
Navoakan'ny filoham-pirenena İBB Ekrem İmamoğlu hanohanana ny olona izay very na very mandritra ny vanim-potoana fanaovan-dra ny fidiram-bolan'izy ireo, ny fampiharana "Invoice on the Fluid" dia mitondra philanthropists sy philanthropists hahita ny tanana izay manome ny tanana. fampiharana [More ...]
Nanomboka tao İzmir ny fampiharana finday Maskematic
Izmir Metropolitan Munisipaly dia nanangana ny rindranasa maskematic finday any amin'ny toerana tsy misy metro rehefa avy ny mascemika napetrany tao amin'ny tobin'ny metro mba hanamorana ny fidirana malalaka amin'ny olom-pirenena ho amin'ny sarim-pitsaboana. Azo apetraka na aiza na aiza ny masematika finday. Tamin'ny fivoahan'ny coronavirus [More ...]
Ny tsy fahombiazan'ny voa amin'ny zaza dia iray ampahatelon'ny fitsaboana tsy fanarahana ny Coronavirus
Araka ny fanadihadiana iray, ny ampahatelon'ny marary izay voatsabo amin'ny tsimok'aretina Corona any New York, dia voan'ny tsy fahampiana voa. Voalaza fa ny 15 isan-jaton'ireto olona ireto dia voan'ny dialysis. Ny fikarohana izay fanontaniana, Vaovao [More ...]
Nanambara ny fitsipiky ny fitsangatsanganana vanim-potoana i Corona
Ny Vaomiera eropeana dia nanambara andiany maromaro mba hisorohana ny dia rehefa vita ny fampiharana ny otrikaretina Corona amin'ny firenena maro. Ny sidina tonga ajanona noho ny zava-kendrena ny fizahan-tany sy ny areti-mifindra [More ...]
Mametraka ohatra ny ivon-toeran'ny fampiofanana arak'asa
Tiorka sy efitrano fihenam-bidy Turkey (TOBB), tarihin'ny fandraisana anjara amin'ny fivoriana an-tsokosoko amin'ny fampiofanana ara-tsosialy Eskişehir Chamber of Industry, ny fametrahana ny asa fametrahana "Eskişehir Chamber of Industry - Center of Vocational Training Center" dia nanome vaovao momba. [More ...]
Ny fangatahana fizarana 1000 amin'ny fanohanan'ny pandrefesana e-Government 3 TL no atao. Ny fandoavam-bola faha-1 sy faha-2 amin'ny vola fanampiana ara-tsosialy dia natokana ho an'ireo sahirana. Ny antsipirihany momba ny fomba fampiharana ny fampiharana ara-tsosialy faha-3 1000 TL [More ...]
Ny fahapotehan'ny olom-pirenena, voavaha ity asa fananana ity
Asım Taş, izay nanana sinkhole teo amin'ny taniny nandritra ny asa tamin'ny talanton'i YHT, dia nanambara fa ny fitaovam-pambolena nambolena tao anaty vilany dia voasaron'ny orinasa mpiantoka. Araka ny tiana hotsarovana; Asım, izay nipetraka tao Kurtköy ao amin'ny Foiben'ny Bilecik tato anatin'ny herinandro lasa [More ...]
Nanomana antso roa vaovao ny ministeran'ny indostria sy ny teknolojia izay hamorona synergies ao amin'ny orinasa amin'ny alàlan'ny andrim-panjakana mifandraika amin'izany, TUBITAK. Ny Minisitry ny indostrian'ny indostria sy ny teknolojia Mustafa Varank dia nanambara fiantsoana fanohanana indroa ho an'ireo indostrialy. «Baiko R&D» sy [More ...]
38 tapitrisa Millie Liras resourced
Zehra Zümrüt Selçuk, Minisitry ny Fianakaviana, ny Asa ary ny Serivisy ara-tsosialy, dia nampitombo ny fahafaha-manao ny serivisy lasopy lasopy izay ataon'izy ireo ho an'ny olona 39 arivo 484 amin'ity taona ity ary ao anatin'izany toe-javatra izany, ny famindrana 38 tapitrisa lira ho an'ny lakozia fandroana. [More ...]
Misokatra ho an'ny mpianatra hiditra ao amin'ny YKS ny 18 May
Ny minisiteran'ny atitany dia nandefa faribolana fanampiny ho an'ny Governemanta miisa 81 momba ny curfew. Voalaza tao anatin'ny faribolana fa hatramin'ny fivoahan'ny coronavirus, dia maro ny fepetra noraisina hiadiana amin'ny valan'aretina sy hampiharana. Received [More ...]
Ao amin'ny faribolana nalefan'ny minisitry ny atitany ho an'ireo governora, nanomboka tamin'ny fipoahan'ny koronavirus, ny soso-kevitry ny minisitry ny fahasalamana sy ny komity siantifika, mifanaraka amin'ny torolàlana nataon'ny filoha Recep Tayyip Erdoğan; Ny fipoahana / fifindrana nateraky ny fahasalamam-bahoaka sy ny filaminam-bahoaka [More ...]
Kocaeli Metropolitan Metropolitan, izay nanamora ny fitaterana tamin'ny fanomezana ny zotra Akçaray ho an'ny serivisy ho an'ny olom-pirenena, dia nanomboka ny asa ho an'ny havoakan'ny mpandeha an-tongotra izay haorina eo akaikin'ny fijanonan'ny Sekapark Tram. Metropolitan Munisipaly [More ...]
Ny filohan'ny İBB Ekrem İmamoğlu dia nanao fanadihadiana tany amin'ny Station Murtidiyeköy-Mahmutbey Metro Line. Manambara izy ireo fa mikasa ny hametraka ny tsipika amin'ny 19 Mey izy ireo, saingy tsy mamela izany ny fizotry ny valan'aretina, hoy i İmamoğlu, "vahiny ho an'ny rafitra famantarana famantarana ny tsipika [More ...]
Ny fivorian'ny toera-pizahantany momba ny fizahantany Izmir Metropolitan dia nivory fanindroany mba hamaritana ny fitsipi-dalàna izay manan-kery ao amin'ny hotely sy trano fisakafoanana sy zava-pisotro aorian'ny fialam-boly amin'ny fepetra coronavirus. Izmir mampihatra ny kaominina Krisis amin'ny ady amin'ny fipoahan'ny coronavirus [More ...]
Boardzmir Science Board nilaza fa 'Tsy tokony hovohana ny tranombarotra miantsena'
Izmir Metropolitan Municipality Science Board dia namoaka fanambarana momba ny fanokafana ireo ivom-barotra fivarotana ny alatsinainy 11 mey, ho dingana voalohany amin'ny fanavaozana ara-dalàna amin'ny fivoahan'ny coronavirus. Komity siantifika "Ny fahasalamam-bahoaka dia tsy mbola niorina [More ...]
Telegram an'ny tompon-daka Lalao Olaimpika voalohany Atatürk Yaşar Erkan
Tamin'ny taona 1936, ny iraika ambin'ny folo tamin'ny lalao olaimpika maoderina dia nokarakarain'ny Alemà tany Berlin. Lalao Olaimpika Grec-romana no nitohy tao amin'ny efitrano fanatanjahantena Deutschland Halle nandritra ny efatra andro. Ny voalohany amin'ny 9 kg tamin'ny 1936 aogositra 61 [More ...]
FNSS Defense Systems Inc. Vehivavy Fanafihana Amphibious mitam-piadiana entin'ny Jeneraly Tale sy Tale Jeneraly Nail Kurt eo amin'ny sehatra We Visionary hampiasaina amin'ny sambo mpanafika maro an'isa TCG ANATOLIA - ZAHA [More ...]
Ny trano famokarana herinaratra an-trano sy nasionaly herinaratra dia eo amin'ny sehatra fametrahana
Ny minisitra Pakdemirli dia nanambara fa miaraka amin'ny karazana coronavirus (Kovid-19) vaovao, dia maro ny olona te handray anjara amin'ny sehatry ny fambolena ary nilaza hoe: “Mivoatra tetikasa izahay ho an'ireo izay handray anjara amin'ity asa ity. Tanora liana amin'ny fambolena [More ...]